Downloads 454 502
Fa FSX & Steam Edition & P3Dv1 P3Dv2 P3Dv3 (tsy P3Dv4)
Fifandraisana amin'ny FSX Edam Edition Prepar3D v3
New Airbus A319-15 Emirates mpanatanteraka - Unique fanompoana, Private Jet. Mihasimba amin'ny Rikoooo
Added FMC amin'ny fiaramanidina rehetra amin'ny sary masina tao 2D takelaka
Added Ground mizara tsara System
New virtoaly cockpit for A380 (A340 VC avy Thomas Rota) -. Previous A380 VC loatra voatiry sy ny fiaramanidina tsy azo tsara nifehy in AP maody
Added Emirates LA Dodgers repaint manokana ho an'ny A380
New 2D Panel sy gauges vaovao ho an'ny A380
Nihatsara virtoaly cockpit ho an'ny A330 sy A340
New HD tontonana sy ranom-gauges for B777
Nampidirin'i DLL msvcr70.dll tao amin'ny lahatahiry lehibe an'ny FSX / P3D hanitsy ny olana amin'ny B777
New GPWS feo Boeing sy Airbus
Auto-installer dika 10
Raikitra maro bibikely
Raikitra ny 2D tontonana ny A380, ny onjam-peo kely loatra.
Ny installation dia nampifanaraka Windows 8 sy Prepar3D.
Manampy ny FMC ao amin'ny VC sy 2D Panel for A33X sy A34X.
New mainty gauges ao amin'ny A33X sy A34X sy vaovao textures in VC HD.
"Advanced VC" amin'ny Alrot for B747 + FMC + Autoland habetsahan'ny.
Ampidiro ny tontonana 2D noforonin'i Rikoooo ho an'ny A380 + Adapting the VC for FSX, nanamboatra bibikely sy teboka maro, zavaboary mahazatra, anisan'izany ny familiana fiara.
Fanampiana FMI ao amin'ny B777-XXX + Fanitsiana ny tontolon'ny fitaratra (alpha chanel) Prepar3D.
Fiovam-po ny textures in DXT5 endrika ho tsara kokoa fampisehoana.
Fanamboarana bibikely maro hafa ...
Complete Emirates Fleet v3.0 azo ampiharina amin'ny FSX SP2, Fahafahana, FSX Wiki puzzle.svg ary Prepar3D v XX. An-panangonana miavaka azo maimaim-poana. Rikoooo nanome saina iray manokana eo amin'ny fampidirana sy ny fomba fiasany ny avionics rafitra, anisan'izany ny manamboatra bibikely maro. Ity sambo dia azo avy Rikoooo irery ihany, tsy misy na aiza na aiza-kafa.
Izany dia ahitana entana ny fiaramanidina rehetra mifanaraka amin'ny Emirates andian-tsambo toy ny ho an'ny Aogositra 18, 2016.
Emirates hira hita ao amin'ny fiaramanidina:
Gauges sasany, indrindra ireo ® Microsoft no reworked ho fampifanarahana tsara kokoa arakaraka ny voafidy modely. Samy manana ny fiaramanidina feo manokana arakaraka ny karazana maotera; General Electric, Rolls Royce-Trent na CFM International. Ianao manao ny fahasamihafana eo amin'ny Boeing 777-200ER sy 777-300 na 777-300ER satria modely ny fiaramanidina no napetraka mba hahatonga anao hahatsapa misy fahasamihafana ao anatin'ny lanja, habe, endrika sy ny maotera hery. Tsirairay fiaramanidina dia voaendrika ho akaiky kokoa ho tena mitovy. Textures sasany no atao amin'ny Rikoooo na ny farany (indrindra alina textures) mba mifanaraka araka izay akaiky araka izay azo atao amin'ny Mitambatra. Utility fiara miasa manodidina B777-XXX dia ny orinasa loko sy mora animation amin'ny tontonana "Utility".
Modely rehetra ireo fitaovana amin'ny rafitra ny fanambaràna ao amin'ny trano fialan-tsasatray (afa-tsy ny 747-8F Cargo) sy GPWS (Ground akaiky Fampitandremana System) ary ny 3D cockpit virtoaly sy ny 2D tontonana. Koa ahitana FMC, Ground Handlin System, autoflare ny Airbus sy ny maro hafa.
Rehefa hanomboka aloha dia efa tokony ho roa-polo hafatra toy ny eo ambany (fa tsy amin'ny Prepar 3D)
Mba valio Manaova toy ny imbetsaka araka izay ilaina.
Valio Eny ho imbetsaka araka izay ilaina
Hianareo ihany no hanao izany indray mandeha rehefa manomboka ny andian-tsambo voalohany.
Misy modely ao amin'ny entana
Airbus A330-200 Emirates FSX & P3D Entre de service de 1999
Capacité de passagers: 3 kilasy 237 au mg 2 kilasy 278
Capacité de passagers: 3 kilasy 257
Airbus A340-500 Emirates FSX & P3D Entre de service de 2003
Capacité de passagers: 3 kilasy 258
Capacité de passagers: 3 Classes 489 (très ela-courrier) de 517 (fahari-courrier) de 2 Classes - 600 (Moyen-courrier)
Main repaint avy Rikoooo
Boeing 777-200 / ER Emirates FSX & P3D Entre de service de 1996
Moteurs: RR Trent 877 (karazana A) / RR 892 (karazana B)
Fanahafana de cabine: 3 kilasy 290 au 2 kilasy 346
Emperorà Boeing 777-200LR FSX & P3D Entre de service de 2007 Est l'une de avions les perfectionnés le Monde
Capacité de passagers: 3 Ny Kilasy - 266
Emperorà Boeing 777-300 FSX & P3D Emirates de possède 12. Tonga de la flotte de 1999
Capacité de passagers: 3 kilasy 364
Emoezoma Boeing 777-300ER FSX & P3D Tonga de la flotte de 1999
Capacité de passagers: 3 kilasy 364 / 358 / 354 au 2 kilasy 427 / 442
Airbus A319-115 Mpanatanteraka ao Emirates FSX & P3D
Ankehitriny, Emirates manolotra lafo vidy tsy manam-paharoa sy ny fanompoana fiaramanidina manokana
Repaint amin'ny Rikoooo
Video: Real A319-115 Emirà mpanatanteraka